Oppo zvakare akarovera vateereri nechinopiwa chitsva uye iyo smartphone yakapfuura haisi kungofanana ne-selfie-centric smartphone. Oppo kazhinji anoratidza hutungamiri hwaro hutsva, zvingava SuperVOOC yekutsvaga teknolojia yekutsvaga kana munguva ichangobva kuzarurwa-10x kurasikirwa kwekutsvaga. Musi weChipiri, Oppo akatanga purofoni yake yekupedzisira, F11 Pro, muIndia kushusha kupikisana nevanenge vari pakati pemakwikwi seVivo uye Xiaomi.
Oppo F11 Pro ine zvimwe zvakakura zvinoshamisa uye zvimwe zvakajairwa maficha. Tisati tasvika kune izvo, ngatitorei ruzivo rwechokwadi kubva munzira. Oppo F11 Pro inoratidzira 6.5-inch Yakazara HD + kuratidzwa ine 90.9 muzana Screen-to-body ratio, mbiri mbiri kumashure kamera ine 48MP f / 1.79 aperture primary sensor uye 5MP yechipiri snapper. Oppo inozvirumbidza nezve yakaderera-mwenje kutora mafoto neayo Ultra Night Mode.
Oppo F11 Pro inodambura notch, panzvimbo iyoyo inoshandisa kamera yekumusoro inosimudzira ine 16MP sensor mairi. Kumashure, ruoko rwunouya neinonakidza complexion - Aurora Green uye Thunder nhema. Pasi pehodhi, Oppo F11 Pro inofambiswa neMediaTek Helio P70 chipset, 6GB RAM, 64GB kuchengetedza, uye 4,000mAh bhatiri ine VOOC Flash Charge 3.0 tsigiro. Kune zvakare kumashure-kwakaiswa chigunwe chemunwe sensor uye kumeso kusunungura rutsigiro kune avo vanokoshesa kuvanzika.
Oppo F11 Pro purogiramu yakakurumidzaIndaneti India / Sami Khan
Nezvinyorwa izvi, Oppo F11 Pro iri kukumbira mutengo ndeye Rs 24,990 uye chinyorwa chinotengesa chiri kutanga Kurume 15 zvichienda mberi.
Panguva yechiitiko, Oppo F11 Pro zvikamu zvaivepo zvemaoko-pachiitiko. Mushure mekupedza nguva yakati rebei nechipo chitsva chaOpo, ndauya kuzogumisa kuti iyo F11 Pro inoita izvi zvinhu zve4 chaiko.
Chinhu chokutanga chinozocherechedza chigadzirwa cheF11 Pro. Kunyangwe kune zvakawanda zvakafanana pakati peF11 Pro uye Vivo V15 Pro, Oppo akaita mamwe ma tweaks kune dhizaini kuti abude pachena. Utatu gradient ruvara kumashure (mu Thunder Nhema) rinotarisa rinotyisa. Girazi rinodzoka rinotora nyore nyore zvigunwe zvemunwe, asi hachisi chinhu chakajeka kana jira racho harigoni kugadzirisa.
Makamera maviri emashure akaiswa panzvimbo, pamusoro pechinyorwa chechinyorwa uye akanyora zvakanyorwa Oppo branding. Kuenderera mberi mumagadzirirwo ndiko kwakandirova sezvo kukwira kwekhamera kunokwira kubva pakati, apo makamera ari kumashure akamira.
Kunze kweizvi zvose, chiitiko chekuona pane F11 Pro chiri panoramic. I90.9 yepurojekiti-ye-muviri yehuwandu hwehuwandu haisi kuseka. Iva kutamba mitambo kana kubata-kutarisa zviratidzo zvako zvaunoda pane Netflix, Oppo F11 Pro ichakupa muchengeti-ku-edge screen yekuona ruzivo pane 6.5-inch kuratidzwa.
Kutaura nezvekukwirira kwekugadzirwa kwekhamera, chinzvimbo chaOppo panzvimbo yacho chakasiyana nenzvimbo yekona yeVivo. Inotaridzika zvakanaka. Asi chii chinonyanya kufadza ndeye kusasimudza iyo kamera inosimuka uye yakachengeteka inodzokera mukati kana basa raitwa. Mune imwe masekondi, kamera yekumberi yaizobuda, yakagadzirira kudzvanya selfies kana kunyange kuvhura foni kana kumeso kwekutanga kwashandiswa.
Iyo software ndiyo inotyaira iyo mushandisi ruzivo uye ini handina kunge ndiri fan yakakura yeOppo yekutanga ColorOS shanduro. Asi iyo ichangoburwa yeCOSOS 6 yakavakirwa pane Android Pie iri kuchinja maonero angu nezve yakagadziriswa tsika ROM.
UI yakachena uye inonakidza UI, yakagadziriswazve nzvimbo yekuzivisa, zvinhu seMutambo Mubatsiri uye Hyper Boost, uye 5GB yemahara yekuchengeterwa gore neOppo's Cloud Service, inonyatsonzwa sekuti Oppo apinda vese mune chikamu che software. Ndiri kufara kupinda mukati medzakadzika yeiyi vhezheni yeColorOS, inogona kukurumidza kutumirwa kune mamwe mafoni.
Oppo akaita kuti ndifarire paVOOC Flash Charge kubva pazuva rekutanga. Uye yakazunza ante nekununura SuperVOOC, iyo yaingorovera pfungwa dzangu. Kunyangwe iyo F11 Pro isingauye neS SuperVOOC, Oppo akagadzira diki kukwidziridzwa kuVOOC uye akawedzera VOOC Flash Charge 3.0 muF11 Pro. Kwandiri, kukurumidza kubhadharira rutsigiro kunofanirwa uye VOOC ndeimwe yeakanakisa muindasitiri, saka kubhadharisa kuti 4,000mAh bheji pack haafanire kunzwa sekurwadziwa.
Oppo F11 Pro yekumisikidza zuva rakagadzirirwa Kurume 5: 48MP kamera, notch-shoma dhizaini, Super Night Mode & nezvimwe